इण्डस्ट्रीका बारेमा यी रोचक तथ्यहरु जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ! | Rajmarga
इण्डस्ट्रीका बारेमा यी रोचक तथ्यहरु जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ!
अहिले प्रविधिको विकाशसंगै वयस्क चलचित्र हेर्ने जनमानसमा पनि वृद्धि आएको छ। अहिले आएर विशाल हुदै गएको पोर्न चलचित्र क्षेत्रका बारेमा आज हामी तपाईलाई केहि रोचक तथ्य बताउने छौं। यस चलचित्र क्षेत्रलाइ रहस्यमयी मानिने गरिन्छ भने यस चलचित्रका भित्रि कुराको बारेमा भने खासै थाहा हुने गर्दैन। हाम्रै नेपालमा पनि यस प्रकारका चलचित्र मानिसहरुले हेर्ने गरेता पनि यस विषयमा कुरा गर्न भने लजाउने गरिन्छ। पोर्न चलचित्र क्षेत्र बारे तपाईलाई अचम्म लाग्ने केहि तथ्य निम्न लिखित राहेका छन्।
पर्नस्टारहरू प्राय स्नातक सकेका हुने गर्छन्
तपाईलाई लाग्न सक्ला कि यस प्रकारको चलचित्र गर्नेहरु पढाई नभएका कारण यस क्षेत्रमा आएका होलान्। तर यस क्षेत्रमा लाग्ने प्राय व्यक्तिहरु प्राय स्नातक सकेका हुने गर्छन् भने आफ्नो मर्जीका कारण यस क्षेत्रमा लाग्ने गरेको खुल्न आएको छ। भने जस्तै कमाइ हुने भएका कारण पढाईका वावजुत पनि मानिसहरु यस क्षेत्रमा लाग्ने गरेको खुल्न आएको छ।
भिडियो बनाउदा प्रयोग गरिएको कपडा बेच्ने गरिन्छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। त्यस समय प्रयोग हुने कपडा महँगो मुल्यमा बिक्रि हुने गर्छ। अनलाइनमा बिक्रीमा राखिने ती कपडाहरु ग्राहकले उल्लेख्य दाम हालेर किन्ने गरेको तथ्य सामान्य हुन थालेको छ।
प्राय मालिक महिलाहरु
अश्लील उद्योगका मालिकहरु प्राय महिला हुने गर्छन्। महिलाहरुको यस क्षेत्रमा कमाइ पनि अत्याधिक हुने भएका कारण पनि यस क्षेत्रमा महिलाहरुलेनै लगानी गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा यस क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि महिलाहरुलाई सजिलो बनाइएको छ।
पोर्न इन्डस्ट्रीमा प्रवेश
यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिला धेरै कानुनी प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ भने यस क्षेत्रम लाग्ने महिला होस् या पुरुष सबैले पूर्ण रुपमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेकै हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
Previous post: ५ सय भन्दा बढी जनावर पर्खिबसेका छन् यी व्यक्तिलाई ,नआउँदा आशु बगाउँदै बस्छन्
Next post: शक्ति बने पीपीएलका सबैभन्दा महँगा खेलाडी
यस्ता रहेछन् युवतीको मन जित्ने १० उपाय